Markani Lama Xasdi Karo Gabdhaha Soomaaliyeed | Xaqiiqonews
Markani Lama Xasdi Karo Gabdhaha Soomaaliyeed
Gabadha qaxootiga ah ee Soomaaliyeed Jawaahir Rooble ayaa beryahan dambe qabsatay baraha bulshada aduunka ka dib markii ay noqotay gabadhii ugu horeeyey ee xijaaban oo ku biirta Horyaalka Ingiriiska
Jawaahir ayaa bogeeda Tuwiterka ku baahisay muuqaal wareysi uu la yeeshay Tilifishin caalami ah, iyada oo ka sheekeysay caruurnimadeeda iyo waxyaabihii ku sababay in ay xiiseeyso kubadda cagta.
Jawaahir ayaa ka sheekeysay qisadii iyada iyo qoyskeeda ay ku galeen Ingiriiska, iyada oo 10 jir xilligaasi ka dib markii dalka uu ka dhacay dagaalkii sokeeyey, iyada oo sidoo kale sheegtay sababta ay si gaar ah u dooratay in ay noqoto Garsoore.
Jawaahir ayaa Tilifishinka u sheegtay jaceylkii ay caruurnimadeed u heysay kubadda cagta iyada oo xustay in ay caruurnimadeeda kubadda ku ciyaari jirtay Soomaaliya, hase yeeshee ma jirin kooxo gabdhaha u gaar ah.
Gabadhii Ugu Horeysay ee Muslimad ah Oo xijaaban
Jawaahir ayaa noqoneysa gabadhii ugu horeysay ee muslimad ah iyo gabartii ugu horeysay ee xijaaban taasi oo qey ka noqoto horyaalka Ingiriiska.
Gabadhani Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ayaa Tiifiga u sheegtay rajeeda ku saabsan in ay ku dayasho u noqoto gabdhaha kale ee muslimiinta kuwaasi oo doonaya xirafadda Garooranimada iyo ciyaaraha.